काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय: के-के खुल्यो, के-के खुलेन? - jagritikhabar.com
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने निर्णय: के-के खुल्यो, के-के खुलेन?
काठमाडौ , २४ भदौ ।
भदौ ३१ गते राति १२ बजेसम्म लागू हुने उक्त आदेशानुसार उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गरिएको र व्यापार, व्यवसायमा केही चलायमान बनाइएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । तीनै जिल्लाका प्रजिअको संयुक्त बैठकपछि साँझ जारी गरिएको विज्ञप्ति अनुसार उपत्यका भित्रमा १६ सिट क्षमताभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने छ । भाडाका ट्याक्सीको हकमा चालकसहित तीन जना र परिवार भित्रमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिका दुई जनासम्म राखी चलाउन सकिने छ ।